Talyaaniga oo gaadiid ugu deeqay booliska Puntland (SAWIRRO) – idalenews.com
Talyaaniga oo gaadiid ugu deeqay booliska Puntland (SAWIRRO)
Dowladda talyaaniga ayaa booliska Puntland ugu deeqday 15 gaari oo qayb ka ah taageerada dhinaca amaanka iyo nabadgelyada Puntland.
Madaxweyne Cabdiraxman Maxamed Maxamuud Farole ayaa ka gudoomey maanta gaadiidka wakiilka safiirka Somlia u qaabilsan Italy .
Madaxweyne ku xigeenka Gen.Cabdisamad Cali Shire ,Gudoomiyaha Barlamanka Cabdirashiid Maxamed Xirsi ,wasiiro ,xildhibaano ,taliyaasha booliska iyo masuuliyiin kale ayaa ka soo qaybgalay xaflada wareejinta oo ka dhacdey xarunta warbaahinta ee duleedka magaalada Garowe.
Gadiidkan ayuu sheegey madaxweynaha Puntland in lagu xiri doono qalab isgaarsiineed oo casri ah kaasi oo la shaqeyn doona xarumo isla Talyaanigu ka dhiseen Puntland ,isagoo raacshay ina ka caawin doonto gaarida goobti ay wax ka dhacaan.
Sidookale madaxwaynaha puntland waxa uu intaasi kudaray in dowlada talyaaniga ay kaqayb qaadanayso mashaaric kale qaybna ay kayihiin dhismaha garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka Boosaaso,Garowe iyo waliba Gaalkacyo.
Mid ka mid ah Dhaqaatiirta ugu weynaa dhinaca haweenka genecolog oo Istanbuul ku geeriyooday